Famantarana 18 fa tsy dia aminao izany ary tonga ny fotoana hirosoana - Fifandraisana
Rehefa tena maniry zavatra marina isika, dia mety ho mora amintsika ny mandresy lahatra ny tenantsika fa marina izany.
Rehefa tia bandy ianao dia misy zavatra kely foana etsy sy eroa azonao adika ho famantarana fa tiany ianao miverina…
… Na dia betsaka aza ny famantarana fampitandremana milaza ny mifanohitra amin'izany!
Ary, mety efa nahazo namana mahafinaritra sy manohana izay milaza aminao fa marina ianao.
Rehefa miresaka amin'ny vadinao momba ny resaka nifanaovanao tamina tovolahy tianao ianao dia azo inoana fa hilaza aminao izy ireo fa eny, io masony io nomeny anao midika izany fa misy zavatra eo anelanelanao.
Ny ankamaroany satria mihevitra ny namanao fa mahafinaritra ianao, ary tsy mahatakatra ny antony mahatonga ny olon-kafa hieritreritra zavatra hafa.
Miaraka amin'ny fanampian'ny namanay, dia hainay tsara ny mandresy lahatra ny tenanay fa misy zavatra miaraka amina bandy na dia miharihary aza fa tsy ao aminao izy.
Fomba fijanonantsika mafy ao anaty baomba misy fanantenana io, satria heverinay fa izany no toerana tsara indrindra hisy.
Raha eo izahay, dia mampientam-po ny raharaha, raha somary manahirana ary tena ambony sy ambany.
Ary mieritreritra izahay fa ny fihazonana ny fanantenana dia midika fa mbola misy ny vintana mety hitranga amin'ny lehilahy tianay.
Fa eto aho milaza aminao fa tsy io bubble io no toerana tsara indrindra tokony hisy anao.
Raha ny tena izy, raha vao haingana ianao dia afaka mamoaka izany bubble izany ary miverina amin'ny tany, dia vao mainka ianao manokatra ny masonao amin'ireo bandy mahatalanjona hafa manodidina anao, ary mijanona tsy mandany fotoana sy hery amin'ny fanahiana momba ny lehilahy tsy liana.
Ka raha mitady antso fanairana ianao dia nahita.
Mety ho toa fitiavana mahery vaika ity any amin'ny toerana, fa izany fotsiny no ilainao hampijanona ny fandaniana ora maro hamakafakana ireo hafatra an-tsoratra ary handroso amin'ny fiainanao.
Vakio hatrany ireo famantarana mazava 18 fa tsy mankao aminao izy, ary tonga ny fotoana hanaovana veloma.
1. Tsy mifandray aminao mihitsy izy aloha.
Rehefa tia olona isika, dia manandrana milalao azy io mahafinaritra daholo, fa ny ankamaroantsika kosa mazàna tsy mahomby, na lahy na vavy.
Raha tiany ianao, dia tena hazoto hiresaka aminao izy, isaky ny mahazo minitra fanampiny izy.
Raha tiany ianao dia ho ao an-tsainy ianao ary tiany ho fantatra raha eo aminao izy.
Fa raha ianao foana no mifampiresaka voalohany, izany no famantarana fa raha faly miresaka aminao izy raha manomboka zavatra ianao, dia tsy dia mazoto manantona anao izy.
2. Mampandry anao izy.
Okay, noho izany dia misy foana ny vintana mety ho voafitaka fotsiny izy hieritreritra fa hiasa ny ‘filalaovana azy tsara’, ary raha miandry telo andro alohan'ny hamerenany ireo lahatsoratranao ianao dia tsy ho afaka hanohitra ny firamainy.
Ary mety misy karazana fialantsiny hafa rehetra.
Fa, amin'ny ankapobeny, raha manandrana tsy tapaka izy milalao mafy hahazoana amin'ny fiandrasana mandritra ny ora maro na andro alohan'ny hamaliany ny hafatrao, na dia mamaky azy aza izy, dia mety tsy te hiresaka aminao be loatra toy izany.
3. Manafoana hatrany izy.
Raha mampiaraka ianareo roa dia ara-dalàna ny fanafoanana hafahafa.
Raha milaza aminao izy fa maty ny boloky na marary ny renibeny na voan'ny sery izy dia minoa azy.
Indraindray, lasa adala ny fiainana, ary tsy manam-potoana hahitana olona isika, na dia tianay aza izany.
Fa raha manafoana anao imbetsaka izy ary tsy mahazo antoka ny hamerenany ny fotoanany manaraka, dia fampitandremana lehibe izany fa tokony hihazakazaka ho any amin'ny havoana ianao.
Efatra. Mitsoka mafana sy mangatsiaka izy.
Minitra iray dia toa tena liana aminao izy ary tena tia olona, ​​ary ny manaraka tsy izy fotsiny.
Ny vintana dia ny fotoana mahaliana rehefa mahatsapa manirery na tsy milamin-tsaina izy, ary rehefa miverina amin'ny tombo-kase na dia efa nanantanteraka ny tanjonao aza ianao, mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka dia mila manotra ny ego-ny.
Raha manandrana maka anao imbetsaka izy ary mandatsaka anao dia tsy izy no anao.
5. Ianao foana no manao drafitra.
Toy ny hoe ianao foana no mandefa SMS matetika aminy dia ianao hatrany no manome hevitra fa tokony hanao zavatra miaraka ianareo roa.
Faly izy manaiky raha tsy manana drafitra hafa izy, fa tsy hanao ezaka handamina zavatra miaraka aminao na hieritreritra hevitra amin'ny daty mety tianao.
6. Izy dia mpisolelaka.
Raha mampifaly anao amin'ny fahaizany miloka izy ary matoky azy, dia mety tsy ho saro-kenatra izy ny manontany anao na milaza aminao ny zavatra tsapany momba anao .
Noho izany, raha tsy manao ny iray amin'ireo zavatra ireo izy dia azonao antoka ny mieritreritra fa niaraka taminy fotsiny izy, tsy nisy fikasana ny hitondra azy lavitra kokoa.
7. Tsy nampiseho sombim-fialonana mihitsy izy.
Ankehitriny mazava ho azy, ny zavatra farany tadiavinao dia ny mirotsaka amin'ny fialonana ary lehilahy manana fahefana . Ilay karazana hanandrana mifehy anao, na tsy afaka matoky anao. Tsia.
Saingy, fialonana kely etsy sy eroa dia misy fambara tena tsara.
Rehefa dinihina tokoa, raha mahita ankizilahy mampiaraka miresaka vehivavy hafa ianao na maheno azy miresaka ex, dia mety hahatsapa fialonana kely ianao farafaharatsiny.
Raha te-hizaha toetra ny rano ianao sao misy anao na tsia, dia azonao atao ny manandrana milaza fa handeha hisakafo atoandro miaraka amin'ny sakaizanao lahy akaiky indrindra ianao, ary jereo hoe inona ny fihetsiny.
8. Manome mofo anao izy.
Mofomamy dia rehefa tsy tena tia anao ny olona iray, fa mbola te hanana olona manodidina mandritra ny fotoana ilany orinasa. Tian'izy ireo ny olona iray ao aoriana.
Ohatra iray tena tsara amin'izany raha toa izy ka mijery ny tantaranao Instagram na tiany ny hafatrao an-tserasera mba hahazoana antoka fa mbola mieritreritra azy ianao, miaraka amin'ny ezaka faran'izay kely indrindra avy aminy, na dia tsy mifandray aminao mihitsy aza.
9. Tsy mahazo ny sainy feno ianao.
Rehefa miaraka ianao dia nahazo maso iray foana tamin'ny telefaoniny izy na nijery ny sorokao tamin'ny mpandroso sakafo tsara tarehy.
Ny olon-drehetra dia mety ho toa variana amin'izao fotoana izao hatrany raha toa ka nisy zavatra lehibe nitranga tamin'ny fiainany naka ny lohany.
Fa raha toa tsy tena ao anaty efitrano foana izy ireo rehefa miaraka ianareo dia afaka manatsoaka hevitra soa aman-tsara ianao fa tsy laharam-pahamehana ho azy ianao.
10. Tsy mbola nihaona tamin'ny namanareo ianareo.
Sady tsy nisalasala nampahafantatra anao tamin'izay manan-danja aminy izy na nanao ezaka hihaona amin'ireo namanao akaiky indrindra.
Raha toa ka miezaka ny hitazona anao hisaraka amin'ny sakaizany izy ary tsy naneho fahalianana hahatratra ireo vady izay tantarainao hatrany ny tantara dia mety tsy mikasa ny hanao matotra izy.
11. Tsy afaka mieritreritra zavatra mahafinaritra nataony taminao izy.
Raha tianao izy dia vonona ny hiloka aho fa efa nanao fihetsika kely tsy tambo isaina ianao hanaporofo izany aminy, raha misokatra amin'izy ireo izy.
Saingy tsy izy, ary mbola tsy mamaly. Raha mipetraka ianao ary mieritreritra momba izany, dia tsy afaka mieritreritra zavatra tsara iray izay efa tsy nety nataony intsony ho anao.
12. Tsy dia mahalala zavatra momba azy ianao.
Raha mbola tsy nosokafany ianao dia tsy marika tsara izany. Izy dia mitazona hatrany ny resaka tsy madio, ary mbola tsy mahita triatra amin'ny fiadiany ianao.
13. Ary tsy tena mahalala momba anao izy.
Tsy mahalala na inona na inona momba anao izy satria mbola tsy nanontany. Satria tsy liana izy.
Tsy tadidiny koa ireo zavatra nanolon-tena ho anao momba anao.
Ny resaka dia manjary banal ary mifantoka manodidina azy, miaraka aminy tsy maneho fahalianana amin'ny andronao sy ny zava-mitranga iainanao.
14. Nangataka anao hanome torohevitra momba ny vehivavy hafa izy.
Ity dia tokony ho somary manazava ny tenany ihany, fa raha mangataka torohevitra aminao momba ny fiainam-pitiavany izy dia tsy liana aminao izy.
Matokia ahy fa tsy mitady hanao fialonana fotsiny ianao. Salama sy tena ao amin'ny faritry ny sakaiza ianao.
15. Nolazaina taminao izy fa tsy mitady fifandraisana.
Eny, fantatro, ny olona indraindray tsy mitady fifandraisana fa tampoka mihaona amin'ilay iray ary mifankatia ihany.
Saingy tsy dia mitranga matetika izany. Matetika kokoa noho ny tsy izy, raha tsy mitady fifandraisana izy, tsy maninona ny mahagaga anao, tsy hanova ny heviny ianao.
Ny fambara fampitandremana hafa dia raha milaza aminao izy fa te hahita izay alehan'ny raharaha fotsiny izy, na mifantoka amin'ny asany amin'izao fotoana izao, na hoe te hiasa amin'ny finamananao alohan'ny hitondrany zavatra any amin'ny ambaratonga manaraka, bla, bla bla.
Mety hino mihitsy aza izy fa marina io zavatra io, fa raha tena tiany ianao dia tsy misy amin'ireny na iza na iza maninona.
16. Ny fifandraisanareo dia miankina tanteraka amin'ny firaisana.
Tsy mifankahita mihitsy ianareo raha tsy tafiditra ny firaisana. Ny ankamaroan'ny fifandraisanao dia amin'ny alina be. Ary, ny filan'ny nofo dia mifantoka amin'ny filàny fa tsy amin'ny anao.
17. Tsy afaka nitodika tany aminy ianao raha mila fanampiana.
Tsy hahazo aina ianao manantona azy raha sendra toe-javatra sarotra ianao ary mila tanana manampy.
18. Fantatrao fotsiny izany.
Raha misy zavatra lalina ao anatinao milaza aminao fa tsy tiany ianao, dia mety tsy tiany ianao toy izany.
Aza mikorontana ireo fahatsapana ireo. Henoy izay tadiavin'ny vavoninao holazaina aminao, ary mandrosoa alohan'ny handratra anao.
Mety tsy ho mora izany, saingy afaka volana vitsivitsy dia hibanjina ny lasa ianao ary hisaotra an'Andriamanitra fa tsy nandany ny herinao bebe kokoa taminy ianao, ary sarotra aminao ny mahatadidy izay tinao momba azy na izany aza.
Mbola tsy azonao antoka na tiany ianao na tsia?Aza mieritreritra irery an'izany rehetra izany fa miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana izay hanampy anao hamantatra ny fihetsiny sy ny famantarana izay andefasany anao.Miresaka an-tserasera amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny crush: toro-hevitra 12 hanampiana anao handroso
Zavatra 20 mety ho dikan'ny lehilahy iray rehefa miantso anao hoe 'Tsara' na 'mahafatifaty' ianao
Famakiana fambara mifangaro avy amin'ny lehilahy: ohatra 9 + Inona no tokony hatao
famantarana fa mitaintaina manodidina anao izy
inona ny zavatra mahafinaritra sasany tokony hatao rehefa mankaleo anao
rehefa misy bandy te hiara-matory aminao fotsiny
vady tsy hahazo asa
ny fomba hitsaharana tsy hifehezana ny fanambadiana